Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 3, 2019 00: 20 No Comments
Cameroon waxay soo dhoofisaa tufaaxa qoorta wargeysyada nadaafad. "Dhamaan waxaan ka heleynaa qayb ka mid ah Faransiiska iyo dalalka kale ee Iskandaneefiyaanka, taas oo ah in laga yaabo inay ka timaado Waqooyiga Yurub! "Waxaa shaaciyay qof reer Cameroon ah" oo haddii aysan dadkani kuu soo dirin warqad musqusha, sidee ayaad ugu tagi lahayd musqusha? " »
Dhammaan calaamadaha ayaa ah in ruuxa beergooyska uu wali ku dhaco Sahar-hoosaadka. Waxay awoodi kari waayeen inay soo saaraan alaabta ugu yar ee ay isticmaalaan maalin kasta. Haddana waa la siiyaa alaabta ceeriin, laakiin anigaWaxay ku xiran yihiin wax walba "Ma ilaawaan de isbedelka ka hor inta aanad cuneyn ".
Kabaabluhu waa kabaha ugu xun, "ayay ku maahmaahdaa Faransiis. "
Nov29 09: 06